मासिक १० लाख बढी कमाउने सञ्जु कोइरालालाई एनसेलले निकाल्यो ! मिडिया व्यवस्थापन नगरेकोदेखि कमिसन खाएकोसम्म आरोप !
ARCHIVE, INVESTIGATION » मासिक १० लाख बढी कमाउने सञ्जु कोइरालालाई एनसेलले निकाल्यो ! मिडिया व्यवस्थापन नगरेकोदेखि कमिसन खाएकोसम्म आरोप !
काठमाडौँ - नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा बढी तलव खाने महिलाका रुपमा परिचित सञ्जु कोइरालालाई एनसेलले हटाएको छ । कम्पनीको भावना अनुरुप काम नगरेको भन्दै उनलाई हटाइएको एनसेल स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार उनले एनसेलबाट मासिक १० लाखभन्दा बढी कमाउने गरेकी थिईन् । तलव, भत्ता, बोनस सबै जोडेर उनको तलव मासिक १० लाखभन्दा बढी हुने गरेको थियो । उनले लामो समयदेखि एनसेलमा कर्पोरेट सम्बाद विभागको निर्देशकका रुपमा काम गरेकी थिईन् ।
राजीनामाको १ महिनापछी जागिर छोडिन् ! यस्ता छन् उनीमाथिका आरोप !
यता राजीनामा दिएको १ महिनापछी उनले जागिर छोडेकि छिन् । उनले गत शुक्रबार जागिर छोडेको एनसेल स्रोतले बताएको छ भने उनको राजीनामा १९ मे मा नै स्वीकृत भएको थियो । कम्पनीको स्वार्थ अनुसार काम नगरेको भन्दै उनलाई राजीनामा दिन वाध्य बनाइएको थियो । एनसेल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनलाई एनसेल विरोधी समाचारहरु रोक्न नसकेको ठुलो आरोप लागेको छ । पछिल्लो समय एनसेल कर छली प्रकरणमा परेपछि एनसेलको बदमासीका बारेमा समाचारहरु बाहिरिएका थिए । साथौ उनलाई आफु निकटहरुलाई करोडौंको विज्ञापन 'रिफर' गरेर त्यसवापत मोटो कमिसन लिएको आरोप समेत लागेकाले व्यवस्थापनले उनलाई निकाल्ने निर्णय गरेको एनसेलका एक उच्च अधिकारीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने । उनलाई एनसेल सम्बन्धि सुचनाहरु चुहाएको समेत आरोप लागेको छ । यद्यपी एनसेलभित्रै पनि उनी निकै राम्रो कर्मचारी रहेको र आजियाटाले भने अनुसारको स्वार्थ्यपूर्ण काम गर्न नसक्दा उनलाई निकालेको बताउनेहरुपनि प्रशस्तै छन् । यसबारे उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
दोश्रो पटक निकालिएकी हुन् सन्जु कोइराला !
यस्तो त उनी पहिलापनि एक पटक निकालिएर पुन: एनसेलमा थमौती भएकी थिईन् । गत वर्ष पनि जुन १ अर्थात जेठ १९ मा उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो । तर पुन: केहि राजनीतिक प्रेसर र उनले आजियाटा कम्पनीका केहि प्रतिनिधिको चाकडी गरेपछि पुन: एनसेलमा जागिरे भएको एनसेल स्रोत बताउँछ । यसअघि कान्तिपुर मिडिया समूह हुँदै एनसेलमा प्रवेश गरेकी उनी विदेशबाट फर्किएर नेपालमा जागिर गर्दै आएकी थिईन्।
एनसेल सम्बन्धी यी समाचार छुटे कि !
१३ अर्व बुझाउनुअघि एनसेलको त्यो आकस्मिक बैठक ! चुडामणिको चिन्तादेखि प्रचण्ड-महराको चर्चासम्म!
चुडामणि अख्तियारको फन्दामा परेपछि आत्तियो एनसेल, आकस्मिक बैठक बसी तिर्यो १३ अर्व लाभकर !
अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव : सापटीका नाममा एनसेलले 'गैरकानुनी रुपमा रकम उठाउने काम' बन्द गर्यो !
एक- दुइ रुपैयाँ विना कारण काट्छ एनसेल, बिलिङमै हुन्छ हिनामिना, कर छल्ने अर्को तरिका यस्तो छ
अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव : 'गैरकानुनी' नेपाल बसाईंको पोल खुलेपछि एनसेलका प्रबन्ध निर्देशकद्वारा राजीनामा
गरी खाने नेपालीमाथि एनसेलको अन्याय, अत्याचारले सीमा नाघेपछि डिलरहरुमा भोटेताल्चा !
एनसेलमा विदेशी कर्मचारीको अर्को दादागिरी : लेखाप्रमुख हादी हाल्मीको यस्तो रबैया !
एनसेलमा नयाँ काण्ड : शतिसलालसँगको मिलेमतोमा भइरहेछन् यस्ता गैरकानूनी धन्दा !
एनसेलका कर्मचारीको ठगी धन्दाको नयाँ शैली छताछुल्ल : १ करोड बढीको रिचार्ज कार्ड बरामद !
पार्टीलाई सहयोग गर्ने एनसेलको विरोध गरेपछि नयाँ शक्तिबाट हरिराम रिमाल निष्कासित भएको खुलासा !
हेर्नुहोस्, एनसेललाई ३३ अर्व मिनाहा गर्न कुन नेताले लिए कति पेश्की!
४ बर्षदेखि यसरी गैरकानुनी धन्दा चलाईरहेको छ एनसेल ! पावर र पैसाका भरमा करोडौं नेपालीलाई ठग्दै!
एनसेल मेलाका नाममा लागुपदार्थको व्यापार !
भूकम्पको त्रासमा रहेका बेला 'आमालाइ' फोन गर्न पैसा थिएन,एनसेलले 'फ्री कल' दिएन, अहिलेको यो बोनस के काम ?
नयाँ बोतलमा पूरानै रक्सी ! नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय कानुन मिच्ने 'क्रिडास्थल' बनाउँदैछ आजियाटा सम्बद्द एनसेल !